Isan-karazany - Delta Engineering Belzika
Talata, 06 Aprily 2021 by Sara
Mpiorina tavoahangy pneumatika
Atsofohy eo anelanelan'ny takelaka 2 ny tavoahangy (vatana) ary ahodinkodina amin'ny alàlan'ny varingarina pneumatika.
Raiso amin'ny tendany ny tavoahangy, ary ahodino amin'ny alàlan'ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo.
Safidy: fakan-tsary marani-tsaina hamantarana ny tena fizoran'ny tavoahangy & ahitsy amin'ny fanarahana azy tadiavina.
Fitaovana fakana tànana azo raikitra
Ity fitaovana enta-mavesatra ity dia ahafahanao misambotra tahon-kazo ary mampiditra azy ireo ao anaty boaty baoritra na mamoaka azy ireo amin'ny mpampita vaovao infeed an'ny mpihazona mpikirakira.
Alarobia 19 Aogositra 2020 by Sara
Mpampiasa fampiharana spout mandeha ho azy tanteraka ho an'ny amponga. Tsy mila unscrambler spout. Ny spouts dia eken'ny rafitry ny fahitana ary raisin'ny & ampidirin'ny robot. Hafainganana: manodidina ny 500 - 800 BPH.
Notsongaina ambany: fikaonan-dàlana, Space saving
Talata 10 Jona 2014 by Delta Engineering
Ampitao ilay mpangataka
Fangatahana fametahana automatique feno ho an'ny tavoahangy plastika, miaraka amin'ny unscrambler. Mampihena ny asa an-tanana izay miteraka fihenan'ny famatsiam-bola fohy. Haingam-pandeha: hatramin'ny 6500 BPH na 12000 BPH (mety handoa koba mitifitra kambana: 2 x 6500 BPH).
Fitaovana tampoka, feno loha tokana-mpangataka ho an'ny tavoahangy plastika. Noho ny endrika famolavolana fitodinana miovaova dia miaro ny lozam-pifamoivoizana sns. Hafainganam-pandeha: manodidina ny 800 - 1200 BPH.
Notsongaina ambany: shrinkage, fikaonan-dàlana, tavoahangy tavoahangy
Alakamisy 26 Febroary 2015 by Delta Engineering
Ity unit ity dia ahafahanao manao andalana vita amin'ny conical endrika, foana, tavoahangy plastika amin'ny fitaovana midina ho an'ny fonosana tavoahangy. Ny tavoahangy tsirairay dia ajanonany mahaleo tena miaraka amin'ny harato micro natokana. Azafady apetraka amin'ny milina hafa ilay unit.
Alatsinainy, 26 Jona 2017 by Delta Engineering
Mametraka vovoka amin'ny vovoka misy tavoahangy / tavoahangy ity vondrona ity. Izy io dia miaro ireo fitoeran-javatra amin'ny fandotoana toy ny vovoka, bibikely, sns. Sarintany 6 50, izay mety hahatratra hatramin'ny 100-XNUMX kapoaka tsirairay.
Notsongaina ambany: fandotoana
Alatsinainy, 19 aprily 2021 by Sara
Solomaso hendry HMT-1 ™
Ny solomaso hendry HMT-1 ™ dia takelaka tsy misy tanana ho an'ny mpiasa indostrialy. Izy io dia fitaovana goavambe feno loha ary mitaingina lohany mba hampiasaina amin'ny tontolon'ny indostria.
Tsy misy tanana 100%: baikon'ny feo. Azonao atao ny mampiasa azy ho an'ny antso an-dahatsary fanohanana lavitra (mampihena ny dian-tongotra lavitra), ny fitetezana antontan-taratasy, sns.